Marcus Rashford oo muddo saddex bilood ah maqnaan kara & Man United oo ku qasban inay bishan Janaayo hesho Weeraryahan cusub – Gool FM
Marcus Rashford oo muddo saddex bilood ah maqnaan kara & Man United oo ku qasban inay bishan Janaayo hesho Weeraryahan cusub
(Manchester) 20 Jan 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa weyn doonta adeegga Weeraryahankeeda Marcus Rashford muddo ku dhow saddex bilood, waxaana naadiga reer England lagu qasbay inay weeraryahan cusub la soo wareegto inta lagu guda jiro suuqa bishaan Janaayo.
Marcus Rashford ayaa la soo sheegayaa inuu dhaawacyo dhabarka iyo canqowga ah la maqnaan karo muddo saddex bilood, sida uu warinayo tifaftiraha Jariiradda The Times ee Henry Winter.
Maqnaanshaha Marcus Rashford marka loo eego, Manchester United ayaa weerarkeedu waxa uu ahaa mid liita markii ay xalay oo Axad ahayd la ciyaarayeen Naadiga Liverpool, isla markaana guuldarro 2-0 ah ka soo qaateen garoonka Anfield kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Si kasta aha ahaatee, Manchester United ayaa lagu qasbay inay soo qaadato weeraryahan cusub inta lagu guda jiro bishaan kaddib dhaawaca soo gaaray Marcus Rashford.
Jariiradda The Independent ayaana dhankeeda warinaysa in kooxda Manchester United ay ka fiirsanayso inay u dhaqaaqdo xiddig u buuxiya booska uu ka dhaawacmay Marcus Rashford.
WAR CUSUB: Kooxda Man City oo dalab qaali ah ka gudbinaysa Bruno Fernandes si ay saxiixiisa ugu garaacdo Man United